Umhla My Pet » Yintoni Ngaba Abafazi olufunayo Man yabo efezekileyo?
Abasetyhini basoloko Ndifuna umntu ebomini babo ukuze babe neempawu ezithile. Ke uluhlu intle elide, kodwa kuba nzima ukufumana zonke ezi mpawu indoda enye. Ngoko ke, ukuba uninzi iimpawu kuxoxwa ngezantsi, amathuba akho wooing abafazi kunye nokwenza bonwabe iya kuba ngaphezulu kakhulu kunokuba abantu baswele ezo mpawu.
Yinukise okulungileyo yaye ingqiqo kunxiba
Abasetyhini undithiyile amadoda unuke. Ngoko ke, Ungaze ulibale ukudla deodorant xa esiya umfazi. Qinisekisa deodorant ukuba isetyenziswa inuka kamnandi kuwe. Ivumba isiqhumiso okanye deodorant kudala emva kokufika wadibana umzimba wenu indibanisela ivumba layo kunye nevumba umzimba wakho. Ngoko ke, indawo deodorant okanye isiqholo ukuba inuka kakhulu xa umhlobo wakho ukuze wenze unuka ukuba kulungile. Ngoko ke, nihambe khetho enetha; ke ubulumko koyisa xa kusenziwa ukhetho deodorant.
Abafazi Siyakuthanda ukuba njengabantu ingqiqo ezilungileyo kunxiba. Kuba uninzi lwabasetyhini, amadoda anxibe zezi turnoffs ezinkulu. Ukuze ndiwakhumbule amadoda kwanabafazi kufuneka kusoloko hlala-ku-mhla kunye fashoni yaye siqhubeke sisenza utshintsho ngendlela abanxiba. nokuba, umntu kufuneka anxibe impahla a khangela kulungile kuye yedwa, na into awathi akuthethi ukuncedisana uhlobo umzimba wakhe.
Emveli sexy kakhulu; ukuze, xa u nga zelela enxibe iimpahla trendy, ukuzama phandle i endala, kodwa ukuya lwendibaniso engalunganga ezifana tee kunye ekwidenim (ukhethe ngobulumko imibala, denim blue usoloko isebenza ngcono).
kuba ngaphaya, kodwa khumbula ukunyaniseka kakhulu kunokuba yingozi
Abasetyhini basoloko Ndifuna ukuba yinxalenye ebalulekileyo yobomi bomntu wakhe; ukuba akubanyamezeli ubuxoki ngezinto ezibalulekileyo. ngoko ke, umntu kufuneka bazame ukugcina ubudlelwane eselubala kakhulu nomhlobo wakhe umfazi okanye intombazana. Bangaze Amadoda ukulibala ukwabelana onke amava abawafumene okanye unee ebomini, yelungileyo nokuba yembi mfazi ebomini babo.
nokuba, kukho ukujijwa kwi tale; xa kufuneka ngaphaya kumfazi wena kubudlelwane kunye, awufikeleli ukuba nabath-. Funda mdumise xa siyisingelayo eyona; kuze ndimfowunela ndandityebe nokuba uthe wazuza 10 neekhilogram; ukuphepha kuthi wayethanda ngumpheki embi nokuba ngaba eneneni. Landela la macebiso kwaye uya kuba nobomi obonwabisayo siqiniseke.
Abasetyhini ngathi ngabantu abathanda iintsana bangaze abasafuni ekuncedeni abadala. Ngamanye amazwi, abafazi Ndifuna umntu ebomini babo ukuze abe nemfesane. Zama ukuba umntu obeka imizekelo emihle, umntu bayathandwa abantu kuye, umntu noku ngabadala.
amadoda amaninzi wenza impazamo ukuba bamncedise nanceba nje efuna ukubonisa ukuba bomelele. Kuba namankazana ithetha ngamandla, ezinenkathalo yaye enemfesane ukuba namandla ukukhusela.
Ngaba ezi mpawu? Ukuba akukho njalo, ukuzama ukuphuhlisa kubo; akuyi kufuneka ukuba sizame kangangoko ekuphuhliseni ezi mpawu kulula kakhulu ekwakheni umzimba ogqibeleleyo okanye ofunda Umngqungqo.